Somaliland: “Xukuumaddan Waxaanu Leenahay, Waar Haddii Qaar Idinka Mid Ahi Faalka Ku Shaqeystaan, Oo Aad Ummadda Uga Dhigaysaan I Gaadhsiiya (Wadaadkaa)”..Sheekh Aadan Siiro
Home Somali News Somaliland: “Xukuumaddan Waxaanu Leenahay, Waar Haddii Qaar Idinka Mid Ahi Faalka Ku...
“Taariikhda Laguma Hayo Nin Yidhaahda Anigaa ILAAHAY Ka Wakiil Ah, Ee Kuyuu Soo Gala Biyaan Idinku Rushaynayaaye…” Sh. A.Siiro
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa si adag uga hadlay Wadaad Reer Boosaaso ah oo Somaliland ka furtay Cilaaj la sheegay in lagu dabiibo Dadka qaba Xanuunnada Sixirka, Isha ama Jindku galo.
Sheekh Aadan-Siiro oo Arrimahan ku soo hadal-qaaday Khudbaddii Jimcaha ee Shalay, ayaa yidhi “Waxaan si kooban uga hadlayaa Nin Wadaad ah oo la yidhi wuxuu ku soo kordhay Magaalada Hargeysa, amigo jeclaa inaynu Afar aan Shan Saacadood aynu u hello inaynu ka hadalno Jinku muxuu yahay, awooddiisu’se maxay tahay, markaynu u eegno Kitaabka ILAAHAY.? Sixirku muxuu yahay, Awooddiisu’se maxay tahay, waa maxayse Awoodda uu ku leeyahay Dadka Mulsimiinta ah. Qofka Muslimka ah awooddiisu maxay tahay marka uu ku jiro Xayndaabka Kitaabka iyo Sunnaha.”
Sheekhu waxa kale oo uu sheegay “Ninkaa Wadaadka ahi Ummaddan aynu ku dhex nool nahay wuxuu ku soo kordhiyey Hab-dhaqan aan Xagga Caqiiqada ku wanaagsanayn. Waxaanu kala hadalnay Dad badan Dad badan oo Xukuumadda ah oo awood u leh inay Arrintaa wax ka qabtaan, laakiin Dheg-jalaq umay siinin. Markii aanu ogaanay in Dad Xukuumadda ka mid ah oo Mansabyo sare haysta iyo Dad badan oo lagu kalsoon yahay oo Ummaddeena ka mid ah, laakiin aan Aqoon badan u lahayn Diintooda ay yihiin Dadka Ninkaa (Wadaadka ah) wax mooday ee kuyuuga ugu jira, taasina waxay keentay in Diinteena iyo Dadnimadeena inay wax yeesho.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Waxa layaab mudan, 480,000 kun oo Xaafid ayaa Somaliland ku nool, oo in ka badan 100,000 kun aanay 15 jir gaadhin oo aan Dambi lahayn, Aabbayaashood iyo Taariikhdooda la garanayo, waxa iswaydiin leh Qur’aanka uu keenay Nin aan khalfiyaadkiisa la garaneyn, ee Ummadda intaa leeg ee Xufaadda ah uu Qur’aankoodu waxba tari waayay. Arrintaasi waa Arrin Calaamatu Su’aal saaran tahay, laakiin aan doonayo inaan si Cad uga hadlo, Isha Shareecadana aan ku eego Wadaadkaa u soo xaytay inuu Lacag badan helo, doonayana inuu Taajir ku noqdo, isagoo Diinta u iibinaya Qaab aan Shareecada Waafaqsanayn.”ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Taariikhda laguma hayo Nin yidhaahda Anigaa Xaafida oo ILAAHAY ka Wakiil ah oo Dadka oo dhan daweynaya ee Kuyuu soo gala biyaan idinku rushaynayaaye, waxaasi Sharci iyo Caqli ahaan waa wax aan la Aqbali karin.”
Sheekhu wuxuu sheegay in Xukuumadda shaqsiyaad ka mid ahi ku lug-leeyihiin Hawsha Wadaadka Reer Boosaaso ka hayo Somaliland, “Iyadoo ay u adeegayaan Dad Xanuunsanaya, laakiin Magacyo leh iyo qaar Dawladda ku jira oo wax moodayaa, ayaa Ummaddii oo dhan u dulleeyay Ninkaa Shaqeysanaya. Waxaanu leenahay Ninkaa Go’aan ha laga gaadho, Waayo? Ummadnimadeenna iyo Diinteena ayuu waxyeelayaa.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey oo uu tafaasiil ka bixiyey Habka uu Sheekhaasi wax u dabiibo, “Waxaan aad ula yaabay, Hablaheennii aynu guryaha ku ilaalinaynay ee aynu intaa korinaynay, ayuu intuu biyo ku rusheeyo ay wada daadanayaan, Waa Taariikh (Arrintani). Arrimo badan baa jira, Dagaalo badan baa innagu soo dhacay, Dhaqaale Xumo ayaa jirta, waxyaabahaasi waxay keenayaan Xanuuno badan oo nafsi ah, tii buu inooga faa’ideystay, i gaadhsiida ka dhacday waad la yaabaysaa, markaasaa Hablihii markay dhacaan ay mid Walba Afar Nin midba dhinaca uu doono Qabanayaa. Xukuumadda waxaanu leenahay, Waar Haddii Qaar idinka mid ahi Faalka ku shaqeystaan, oo aad Ummadda uga dhigaysaan I gaadhsiiya (Wadaadkaa). Culimadii hore waxay yidhaahdeen Hab-dhaqanka Madaxdu leeyihiin ayaa Ummaddana raadeeya. Ummadda waxaanu leenahay haddaad doonayso In Qur’aan lagugu daweeyo Masaajidka kaalay, Carruurtaa yaryar ee Qalin-qoyanta ah ayaa Qur’aanka kugu dhamaynaysee.”
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud waxa kale oo uu Farriin u diray Xukuumadda, “Dawladda waxaanu u sheegaynaa, Dawladyahay Fashilantay, ma waxay gaadhay Maanta in Hablaheennii iyo intii jilicsanayn ee Xanuunsanaysay in dhibaato kale sii gaadho, oo Faraqyadooda la furt. ? waxaanu leenahay Maamulka Maanta ha ku eegina Ninkaa. Isagana waanu u nasteexaynaynaa, oo waxaanu leenahay Adeer waxaad Aqoon leedahay oo aad wax hayso Annaga noo kaalay. Caalamka Islaamka meel aanaan soo marin ma jirto, Wax Qaabkaa wax u daweysaa ma jirto.”ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey “In ka badan Konton Masuul oo aanu wanaag ku tuhmayno ayaanu la hadalnay, oo aanu ku nidhi Arrintaa wax ka qabta, laakiin may dhicin, kol hadday yeeli waayeen inaanu halkan (Masaajidka) ka hadalnaa waa Daruuri, haddii wax la qaban waayana isaga laftiisa ayaanu meesha ugu tagaynaa, waxaanu ku odhanaynaa waxani meeshan kama shaqeynayaan, ee halkay ka shaqeynayaan la tag.”